အဖေ့ဆံပင်ဖြူတွေကတော့ ပြန်ဖြူလာဦးမှာပဲ ဒါပေမယ့် ဆေးဆိုးပေးမယ့် သမီးလေးကတော့ အနားမှာမရှိတော့ဘူး – Youth Bar
အဖေ့ဆံပင်ဖြူတွေကတော့ ပြန်ဖြူလာဦးမှာပဲ ဒါပေမယ့် ဆေးဆိုးပေးမယ့် သမီးလေးကတော့ အနားမှာမရှိတော့ဘူး
ဘယ်လူတွေ သူ့လောက် သတ္တိရှိမလဲ ?
မြန်မာပြည်ကြီးအတွက် သူမ သတ္တိရှိရှိအသက်ပေးသွားခဲ့ရတယ်
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ သူမသတ္တိ ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်သတ္တိပါဘဲတကယ် လေး စား စိတ် မ ကောင်းဖြစ်ရပါတယ် ညီမလေး
ဒီနေ့ကြွေလွင့်ခဲ့တဲ့ Angel က သွေး၊ မျက်ကြည်လွှာ၊ ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကို လှူဒါန်းခဲ့
ယနေ့ မန္တလေးမြို့ ၈၄ လမ်းနှင့် လမ်း ၃၀ တွင် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် နေရာတင် ပွဲချင်းပြီး သေ+× ဆုံးခဲ့ သော မကြယ်စင်မှာ အသက် (၁၉) နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ မန်းလေး အေးအေးမြင့်ဆံပင်ညှပ် ဆိုင်က တစ်ဦးတည်းသောသမီးဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
သူမ မသေဆုံးခင်ကသွေး၊ မျက်ကြည်လွှာ၊ ခန္ဓာရဲ့မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆို လှူမည့်အ ကြော င်း သွေးအမျိုးအစားနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ကို ရေးသားကာ “
စာရွက်စာတမ်း နဲ့ဆိုရင်တောင် angel အသက်×+ သေ+× မှာ လှူခွင့်ရမှာ တကယ်လိုအပ်ခဲ့ရင် angel အသက်မသေလဲ အသေခံပြီး angel လှူပါတယ်” လို့ ဖေ့ဘုတ်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာကို တွေ့ရ လို့ ပြည်သူများက လွန်စွာဝမ်းနည်းနေကြပါတယ်။
အသက် (၁၉) နှစ်
မန္တ​လေး လမ်း ၃၀× ၈၄လမ်း စစ်​ကြောင်း
စနိုက်ပါထိတာ ၁၉နှစ်အရွယ်လေးပါဆုံးသွားပါပြီ ။
​ပြောစရာစကားလုံးမရှိ​တော့​အောင် ​ကြေကွဲရပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သွက်လက်တဲ့ဆရာမမို့ အရမ်းနှ​မျောရပါတယ်။ ​ကောင်းကင်ဘုံမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အနားယူပါညီမဆရာမ​လေးရယ်။
ဆရာမတို့သင်တန်းမှဆရာ၊ဆရာမများအားလုံးနှင့်​သင်တန်းသား/သူများအားလုံးမှ မိသားစု နှင့် အ တူထပ်တူထပ်မျှ ​ကြေကွဲဝမ်းနည်းဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဒီအဖေမှာဒီသမီးလေးတစ်ယောက်ပဲရှိတာအဖေ့ရဲ့ကမ္ဘာလေး‌တဲ့ခုတော့အသိုက်မြုံတွေ ပျက်ဆီး ကုန်ပြီ
ဘယ္လူေတြ သူ႕ေလာက္ သတၱိရွိမလဲ ?
ျမန္မာျပည္ႀကီးအတြက္ သူမ သတၱိရွိရွိအသက္ေပးသြားခဲ့ရတယ္
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမဲ့ သူမသတၱိ ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သတၱိပါဘဲတကယ္ ေလး စား စိတ္ မ ေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္ ညီမေလး
ဒီေန႕ေႂကြလြင့္ခဲ့တဲ့ Angel က ေသြး၊ မ်က္ၾကည္လႊာ၊ ခႏၶာတစ္ခုလုံးကို လႉဒါန္းခဲ့
ယေန႕ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၈၄ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၃၀ တြင္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေနရာတင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသ+× ဆုံးခဲ့ ေသာ မၾကယ္စင္မွာ အသက္ (၁၉) ႏွစ္သာ ရွိေသးတဲ့ မန္းေလး ေအးေအးျမင့္ဆံပင္ညွပ္ ဆိုင္က တစ္ဦးတည္းေသာသမီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
သူမ မေသဆုံးခင္ကေသြး၊ မ်က္ၾကည္လႊာ၊ ခႏၶာရဲ႕မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းမဆို လႉမည့္အ ေၾကာ င္း ေသြးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ေရးသားကာ “
စာ႐ြက္စာတမ္း နဲ႕ဆိုရင္ေတာင္ angel အသက္×+ ေသ+× မွာ လႉခြင့္ရမွာ တကယ္လိုအပ္ခဲ့ရင္ angel အသက္မေသလဲ အေသခံၿပီး angel လႉပါတယ္” လို႔ ေဖ့ဘုတ္မွာ ေရးသားထားခဲ့တာကို ေတြ႕ရ လို႔ ျပည္သူမ်ားက လြန္စြာဝမ္းနည္းေနၾကပါတယ္။
မႏၲ​ေလး လမ္း ၃၀× ၈၄လမ္း စစ္​ေၾကာင္း
စနိုက္ပါထိတာ ၁၉ႏွစ္အ႐ြယ္ေလးပါဆုံးသြားပါၿပီ ။
​ေျပာစရာစကားလုံးမရွိ​ေတာ့​ေအာင္ ​ေၾကကြဲရပါတယ္။ ငယ္႐ြယ္သြက္လက္တဲ့ဆရာမမို႔ အရမ္းႏွ​ေမ်ာရပါတယ္။ ​ေကာင္းကင္ဘုံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အနားယူပါညီမဆရာမ​ေလးရယ္။
ဆရာမတို႔သင္တန္းမွဆရာ၊ဆရာမမ်ားအားလုံးႏွင့္​သင္တန္းသား/သူမ်ားအားလုံးမွ မိသားစု ႏွင့္ အ တူထပ္တူထပ္မွ် ​ေၾကကြဲဝမ္းနည္းဂုဏ္ယူပါတယ္။
ဒီအေဖမွာဒီသမီးေလးတစ္ေယာက္ပဲရွိတာအေဖ့ရဲ႕ကမာၻေလး‌တဲ့ခုေတာ့အသိုက္ၿမဳံေတြ ပ်က္ဆီး ကု န္ၿပီ
ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ Angel လေးရဲ့ဆန္ဒပြရင်း သတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ Video
ကမ္ဘာကျော်လက္ခဏာဆရာကြီး ကိုင်ရို ဟောကိန်းနဲ့ အနာဂတ်မြန်မာပြည်ကြီး၏ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဆိုင်ရာ အလွန်အားရဖွယ်ကောင်းသော အချက်များ